အမည်မသိစာအုပ်: " သူဌေးနဲ့ ကျွန်မ ဇာတ်လမ်း "
လွန်းလွန်းသည် ညက စာဖတ်တာ များသွားလို့ အိပ်တာနောက်ကျပြီး မနက် နာရီ နှိုးစက် မြည်တဲ့အချိန် ရုတ်တရက် မထနိုင်။မထချင် ။
"အင် .... အိပ်ချင်သေးတယ် .... အူး ...”
ရုံးနောက်ကျတာကို နဲနဲမှ လက်မခံတဲ့ အထွေ ထွေ မန်နေဂျာကြီး ဦးစောဆိုင်မွန်ရဲ့မျက်နှာကြီး ကို မြင်ယောင်လိုက်မိပြီး လူးလဲထ ရသည် ။ ရေချိုးခန်းထဲ ပြေးဝင်သည် ။ သွားတိုက်ရင်းနဲ့ ရေချိုးသည် ။ ရေချိုးတော့ ညက ဖြစ်ပျက်တာ တွေကြောင့် အရေတွေနဲ့ ပေပွခဲ့ရလို့ ညစ်ပတ်နေတဲ့ ပေါင်ကြားက ပိပိကို သေသေချာချာ ဆေး သည် ။ ညက ဖတ်တဲ့ အင်တာနက်က စာက ရိုးရိုးစာ မဟုတ်ဘူး ။ကာမ စပ်ယှက်တဲ့ အကြောင်းတွေကို အသားပေး ထားပြီး ကာမစိတ်ထကြွလာအောင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း (တစ်တစ်ခွခွ) ရေးထားတဲ့စာမျိုးမို့ ညက အဲဒီ စာဖတ်ရင်း လွန်းလွန်း စိတ်တွေ ထန်လာသည် ။လက်နဲ့ အာသာ ဖြေမိရသည် ။လွန်းလွန်း ပိပိ ကို ပွတ်မိတော့ ပွတ်ပြီးရင်း ပွတ်ချင်ရင်း ဖြစ်ရ သည် ။ ပိပိ အတွင်းအခေါင်းထဲက မခံမရပ်နိုင်အောင်ဘဲယားသည် ။ လက်ညှိုးနဲ့ ထိုးသွင်းမိရ သည် ။ အရေတွေက အရမ်းစိုစိုရွှဲနေသည် ။ လက်ညှိုးကို ထိုးလိုက်ထုတ်လိုက် လုပ်မိနေရ သည် ။ လွန်းလွန်းသည် အာသာဖြေချင်လို့ ဒီစာတွေ ဖတ်တာလား ... ဒီစာတွေ ဖတ်မိလို့... အာသာဖြေချင်တာလား ... သူမ ဖါသာ တွေးကြည့်နေသည် ။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် အပျို ပေါက်ထဲက ဖြစ်ပေါ်ရတဲ့ ဒီစိတ်ကို လက်တွေ့ ယောင်္ကျားတယောက်နဲ့ ကာမစပ်ယှက်တာ မ လုပ်နိုင်သေးခင်တော့ လက်နဲ့ ပွတ်သပ်ထိုးနိုက်ပြီး အာသာဖြေရုံနဲ့ဘဲ တင်းတိမ်နေရသည် ။ ပိပိ ကို လက်နဲ့ကိုင်ပွတ်ကာ ဆေးရတော့လဲ စိတ် ထဲမှာ တောင့်တလိုလား လာရပြန်သည် ။ အို .... ရုံးနောက်ကျလို့ မဖြစ်ဘူး ။အမြန် ရေချိုးတာကို ရပ်လိုက်ရသည် ။ ညက တဏှာစိတ်လွန်နေလို့ ခါတိုင်းလို ရုံးသွားမဲ့ အ၀တ်အစားတွေ ကြိုတင် မပြင်ဆင်ခဲ့လို့ နဲနဲပို အချိန်ကြာနေခဲ့ရသည် ။ အင်း .. လူသားသဘာဝ အသွေးအသားနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ ကိုယ်ခန္ဒာက ပုံမှန်ကျန်းမာနေတာ့လဲ ဒီစိတ်တွေက ရှိနေရတာ ပေါ့ ။ အင်း ... လွန်းလွန်း ဘွဲ့ရပြီးတာဘဲ တနှစ်ကျော်နေပြီလေ ။ သူမကို ကြိုက်တဲ့ လူတွေက အရမ်းများခဲ့ပေမဲ ခုထိ တယောက်ကိုမှ သူမ မကြိုက်သေး ။ ရီးစား မထားသေး ။ မတွဲသေး။ ယောင်္ကျားရဲ့ အထိအတွေ့တော့ သူမ လိုလား နေပြီဆိုတာ သူမဖါသာတော့ လွန်းလွန်း ကောင်းကောင်းကြီး သဘောပေါက်နေပေသည် ။ ရုံးကို ရောက်တော့ ကိုးနာရီထိုးဖို့ ငါးမိနစ် ရှိနေပြီ ။ တော်ပါသေးသည် ။နောက်မကျလို့။ ဦးစောဆိုင်မွန် ခေါ်သည်ဆိုလို့ လွန်းလွန်း သူ့ ရုံးခန်းကြီးထဲ ၀င်ခဲ့သည် ။ ဦးစောဆိုင်မွန်သည် ဖိုင်တခုကို ဖတ်နေရာက မော့ကြည့်သည် ။ပါဝါ မျက်မှန်ထူထူကြီးနဲ့ ဦးစောဆိုင်မွန်ကို လွန်းလွန်း က
“ ဆရာ ခေါ်တယ်ဆိုလို့ . .”
လို့ပြုံးပြုံးလေး လက်ကလေးနှစ်ဖက်ေ၇ှ့မှာ ယှက်ပြီး ပြောလိုက်သည် ။
" အော် ... လွန်းလွန်း ...မနက်ဖန် ဘော့စ် ပြန်လာမယ် ... ကျနော် ရယ် ... လွန်းလွန်းရယ် . ကားနှစ်စီးနဲ့သွားကြိုမယ် ... ကားမောင်းတဲ့ ယာဉ်မောင်းတွေကိုလဲ လွန်းလွန်းဘဲ ပြောပြထားပါ . .”
“ ဟုတ်ကဲ့ ဆရာ . .”
“ လွန်းလွန်း ဒေါ်ဝင်းဝင်းသော်ဆီက မသိတာတွေ မေးထားတယ် မဟုတ်လား . .”
“ဟုတ်ကဲ့.. မေးထားပါတယ် . .”
“ မနက်ဖန်က စပြီး လွန်းလွန်းက ဘော့စ် ရဲ့ ကိုယ်ရေး အတွင်းရေးမှူးပေါ့...ဟုတ်ပြီနော်... ဘော့စ်က သဘောကောင်းပါတယ် ...ကျနော်နဲ့ က ကောလိပ်မှာထဲက သူငယ်ချင်းတွေလေ . .”
လွန်းလွန်းသည် အလုပ်ဝင်တာ မကြာသေးပါ။ သူ အလုပ်စလုပ်တော့ သူတို့ ကန်ပဏီရဲ့ သူဌေး ဦးတင်ထွန်းဇံ မရှိ ။ နိုင်ငံခြားခရီးထွက်နေသည် တဲ့ ။ သူ့ကို ဦးစောဆိုင်မွန်က အလုပ်ခန့်တာ ဖြစ်သည် ။ သူဌေးရဲ့ စာရေးမအဖြစ် လုပ်ရပေ မည်လို့ ခန့်တုန်း က ဦးစောဆိုင်မွန်က လွန်းလွန်းကို ပြောသည် ။ သူဌေး မရှိတုံး လုပ်ရမဲ့ အလုပ်တွေကို မန်နေဂျာတယောက်ဖြစ်တဲ့ ဒေါ်ဝင်းဝင်းသော်က သူမကို သင်ပြပေးသည် ။ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်တွေပေါ့။ သူဌေးဦးတင်ထွန်း ဇံ ဘာတွေ ကြိုက်တယ် .. ဘာတွေမကြိုက်ဘူး ... ဆိုတာတွေ ကြိုတင် ပြောပြသည် ။ ဒေါ်ဝင်းဝင်းသော်သည် ယခင်က သူဌေး ဦးတင်ထွန်းဇံရဲ့ စာရေးမဖြစ်ခဲ့သည် လို့ ဦးစောဆိုင်မွန်က လွန်းလွန်းကို ပြောပြဘူးသည် ။ ဒေါ်ဝင်းဝင်းသော်သည် တော်တော် ချော သည် ။ လွန်းလွန်းသည်လဲ မိန်းမချောလေး ဖြစ် ပေမဲ့ ဒေါ်ဝင်းဝင်းသော်ကလဲ တမျိုးချောသည် ။ အင်း..မနက်ဖန်က စပြီး ဘော့စ်အသစ်နဲ့ အလုပ်လုပ်ရပေတော့မည် ။ လွန်းလွန်း..သူဌေးရဲ့ ပုံကိုတော့ သူ့ရုံးခန်းကြီးထဲက နံရံမှာ တွေ့ဘူး ထားသည်.။ နံမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်နဲ့ ယှဉ်တွဲကာ ရိုက်ထားတဲ့ပုံပါ ။ ဘော့စ်က အသက်တော့ သိပ်မကြီးသေးဘူး ။ ၄၀ လောက်တော့ ရှိပြီ ထင်တာဘဲ ။လူပျိုကြီး တဲ့ ..... ။
ဦးတင်ထွန်းဇံသည် အာရှ အရှေ့ဖျား စီးပွါးရေး မဂ္ဂဇင်းကို စိတ်ပါဝင်စားစွာ ဖတ်နေစဉ်မှာဘဲ လေယာဉ်ကြီးသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရန်ကုန်လေဆိပ်သို့ ဆင်းသက် နေပါပြီ ။ သူ့ငယ်သူငယ်ချင်းလဲဖြစ်..သူ့အထွေထွေ မန်နေဂျာလဲဖြစ်တဲ့ စောဆိုင်မွန် လာကြိုနေ သည်။ စောဆိုင်မွန်နဲ့အတူ ကောင်မလေးတ ယောက် ပါလာသည် ။ ထင်းနေ... ၀င်းနေတဲ့ ကောင်မလေး ။ အရပ်မြင့်မြင့်..ကိုယ်လုံးလှလှနဲ့ ရုပ်ကလဲ တော်တော်လန်းသည် ။ ဘယ်သူများ ပါလိမ့်။ ရုံးဝန်ထမ်း အသစ်လား ... စောဆိုင်မွန်ရဲ့မိသားစုထဲကလား ။ လေဆိပ် အပြင်ရောက် တော့ သူ့ကားဒရိုင်ဘာတွေဖြစ်တဲ့ မောင်စိုးနဲ့ မောင်မောင်က ကားတစီးပေါ်ကို သူ့ပါလာတဲ့ သေတ္တာတွေ အထုပ်တွေ တင်နေတာ တွေ့ရ သည် ။ မောင်စိုးမောင်းသော သူ့လင်ကရူဆာ ကားထဲ ရောက်မှ စောဆိုင်မွန်က မိတ်ဆက်ပေး သည် ။
" ဇံကြီး ... ဒါ ဇံကြီးရဲ့ အတွင်းရေးမှူး အဖြစ် ကိုယ် အလုပ်ခန့် ထားပေးတာ ... လွန်းလွန်း ... တဲ့ ... နံမည်အပြည့်အစုံက လွန်းခင်ခင် တဲ့ ... "
သူ ကောင်မလေးကို တချက် လှမ်းကြည့် လိုက်တော့ ကောင်မလေးက ပြုံးပြသည် ။ ကောင်မလေးကို သူသိပ်သဘောကျသွားသည် ။ သူ့ စိတ်ကို ဖမ်းစားစေတဲ့ အလှပိုင်ရှင်လို့ ပြော နိုင်သည် ။ မိန်းမဆိုတာ အဆန်းမဟုတ်တဲ့ သူ့ ဘ၀မှာ သူ့စိတ်ကို လှုပ်ရှားစေလို့ပါ ။စောဆိုင်မွန် ဘယ်လိုများ ရှာထားတာလဲ ။ ခန့်တော့လဲ သူ့ အတွင်းရေးမှူး လုပ်ဖို့တဲ့ ။ အတွင်းရေးမှူး ဆိုတာက အမြဲ နီးနီးကပ်ကပ် နေရတာ ... ဒီ အချောစားလေးနဲ့ သူနဲ့ .. အိုး ... ဖြစ်ပါ့မလား ... လာပြန်ပြီ ။ အရင်တခါလဲ စောဆိုင်မွန်သည် ၀င်းဝင်းသော်ကို သူ့ ပီအေ အဖြစ်ခန့်ထားခဲ့ သည် ။ သူအဖေ လက်ထက်ထဲက မြန်မာပြည် အနှံ့ မှာ ရှိနေတဲ့ သူတို့ မိသားစုပိုင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေကို မကြာမကြာ လှည့်လည် ကြည့် ရှုရတော့ ၀င်းဝင်းသော်က သူ့ပီအေမို့ အမြဲ လိုက်ပါရသည် ။ တကွေ့မှာ အတွေ့နောက် ကောက်ကောက်ပါ သွားကြမိရသည် ။ ယခုလဲ လာပြန်ပြီ ။ ဒီ လွန်းလွန်းက ၀င်းဝင်းသော်ထက် တောင် လန်းသေး မိုက်သေးသည် ။ အရက်ကြိုက်တဲ့လူကို အရက်ရောင်းတဲ့ ဆိုင်မှာ အလုပ်ခန့်ထားမိသလို ဖြစ်နေမည် ။ အင်း ... နှစ်ယောက်ထဲကျမှ စောဆိုင်မွန်ကို ရီစရာ အဖြစ် ပြောအုံးမှဘဲ ။ ထောက်ကြန့်က သူ့ခြံကို အရင်ဝင်သည် ။ သူ နိုင်ငံခြားမှာ ရှိနေစဉ် စောဆိုင်မွန် သည် သူ့အတွက် သူလိုချင်သော သတ္တ၀ါတွေ ရှာဖွေပေးထားသည် ဆိုလို့ ခရီးရောက်မဆိုက် တွေ့ချင်လို့ ဖြစ်သည် ။ ဥပေဒနဲ့ ငြိ မငြိတော့ သူ မသိ။ငယ်ငယ်ကထဲက တင်ထွန်းဇံသည် တိရစ္ဆာန် မျိုးစုံ မွေးသည် ။ အဖွားက သူ့ကို အလိုလိုက်ထားတာ ဖြစ်သည် ။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်က အဖွားရဲ့ တပည့်တယောက် လာတော့ မိချောင်းပေါက်စလေး ပါလာသည် ။ တင်ထွန်းဇံက ဒီလိုအကောင်တွေ ကြိုက်တယ် ဆိုလို့ ။ အဖွားကဘဲ အစားကျွေးကာ မွေးပေး သည် ။ ဦးလေးတယောက်ကလဲ အမဲပစ်သွားရာက အပြန် မျောက်လွှဲကျော်တကောင် ယူလာပေးသည် ။ ခြံကျယ်ကြီးထဲဆိုတော့ ဘယ်သူမှလဲ မသိ ။ ဘယ်သူမှလဲ မတားဘူးပေါ့ ။ နေမြင့်လေ အရူး ရင့်လေ ဆိုတဲ့ စကားလိုဘဲ အသက်ကြီးလာပြီး.. သူကိုယ်တိုင် သူဌေးဖြစ်လာတော့သူ့ ဒီရောဂါ က ပိုကြီးမားလာသည် ။ အခု စောဆိုင်မွန်က သူငယ်ချင်းလဲဖြစ် ဘော့စ်လဲ ဖြစ်တဲ့ သူ့လိုအင် ကို ဖြည့်ဆည်းပေးထားသည်။ ဆင်ပေါက်စလေး တကောင် ၀ယ်ပေးထားသည် ။ ဆင် ကတော့ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်နိုင်သည် ။ ပိုင်သူတွေလဲ ရှိလို့ သူတို့ဆီက ၀ယ်ထားတာပါ။ အခြား..တောရိုင်းသတ္တ၀ါတွေကတော့ ၀ယ်ခွင့်..ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ဘယ်ရှိမလဲ ။
စောဆိုင်မွန် တင်ထွန်းဇံနဲ့ လွန်းလွန်းတို့ ဆင်ကလေး သွားကြည့်သည် ။ ဆကလေးသည် နို့မပြတ်သေး ။ သူ့ခြံထဲမှာ နို့စားနွားမတွေလဲ ရှိတာကြောင့် ဆင်ကလေးကို နွားနို့တိုက်ရတာ အဆင်ပြေသည် ။ လွန်းလွန်းသည် သူမဘော့စ်က ဆင်ရော.. တခြားအကောင်ဘလောင် တွေရော မွေးထားတာ တွေ့လို့ ထူးဆန်း အံ့သြနေသည် ။ ပိုက်ဆံ ပေါလို့ လျှောက်လုပ်နေတာ လားလို့ တွေးမိသည် ။
ဒေါ်ဝင်းဝင်းသော်သည် အိပ်ကောင်းဆဲ အိပ်နေတုန်း ယောင်္ကျား ဖြစ်သူ ဦးခင်မောင်လင်းက သူမ အနောက်ကနေ သူမရဲ့ ဖင်အိအိကြီးတွေ ကို ဆုပ်နယ်နေတာကြောင့် နိုးလာရသည် ။
" ဟင် ..မောင် . .ဘာလဲ . .လုပ်ချင်လို့လား . . "
" အင်း . .၀င်းနဲ့မောင် မလုပ်ရတာ ဘယ်လောက် ကြာနေပြီလဲ . ."
" အင်း . .အိပ်ချင်တုန်းဘဲ .... မောင် လုပ်ချင် လုပ်လေ . ."
ဒေါ်ဝင်းဝင်းသော် ပက်လက် အိပ်လိုက်ပြီး ၀တ်ထားတဲ့ ည၀တ် ဂါဝန်ပါးလေးကို ခါးအထိ လှန်တင်လိုက်သည် ။ အသားအလွန်ဖြူတာကြောင့် ၀င်းဝါသော ဒေါ်ဝင်းဝင်းသော်ရဲ့ ခါးအောက်ပိုင်း တွေက မှောင်နေတဲ့ အိပ်ခန်းထဲက ကုတင်ကြီးပေါ်မှာ ထင်းနေသည် ။ ဦးခင်မောင်လင်းက ဒေါ်ဝင်းဝင်းသော်ရဲ့ ပေါင်တန်ရှည်တွေ ကြားမှာ နေရာဝင်ယူလိုက်သည် ။ သူ့လိင်တန် မာမာကြီး က တန်းတန်းကြီး မတ်ထောင်နေသည် ။ ဒေါ်ဝင်းဝင်းသော်ရဲ့ အင်္ဂါစပ်ကြီးသည် အမွေး ရိပ်ထားလို့ ပြောင်တင်းကာ ရှင်းနေသည် ။ မို့ဖေါင်းလှတဲ့ အင်္ဂါစပ်ကြီး အလည်က အကွဲ ကြောင်း နီညိုညိုကြီးက တော်တော် ရှည်လျား သည် ။ပေါင်ကို ဖြဲကားလိုက်လို့ နှုတ်ခမ်းသား တွေက ဖျပ်ကနဲ ဟသွားသည် ။အတွင်းသား ပန်းရောင်တွေကို တစွန်းတစ မြင်နေ၇လို့ ဦးခင်မောင်လင်းသည် နဂိုက ထကြွနေသော ကာမစိတ်တွေဟာ ဟုန်းကနဲ ထတောက်သွား ရပြီး သူ့လိင်တန်ကြီးကို တေ့ကာ ထိုးသွင်းလိုက် လေသည် ။
" အို့ . .အင်း . .မောင့်ဟာက အရင်ထက် ပိုကြီး လာသလိုဘဲ . . တခုခုများ လုပ်ထားလား ... "
" မောင် ဘာမှ မလုပ်ပါဘူး . .ဒီလိုပါဘဲ . ."
သူ့လိင်တန်ကို ကြီးလာသည် ပြောလိုက်တော့ ဦးခင်မောင်လင်း ကျေနပ်သွားသည် ။ လိင်တန်ကြီး ... စီးစီးကြီး သူမအင်္ဂါစပ်ထဲ တိုးဝင်လာ တော့ ဒေါ်ဝင်းဝင်းသော်လဲ
" အင်း . .ဟင်းဟင်း . .."
လို့ နုတ်ဖျားက ညည်းလိုက်ရင်း ပေါင်တွေကို ထောင်ကားပေးလိုက်သည် ။ ဦးခင်မောင်လင်း ထိုးဆောင့်သည် ။ ဒေါ်ဝင်းဝင်းသော် အောက် ကနေ ပင့်ဆောင့်ပေးရင်း . .
" လုပ် ... လုပ်... မောင် . .မြန်မြန်လေး ... "
လို့ ပြောသည်။ ဦးခင်မောင်လင်း ခပ်သွက်သွက် ထိုးဆောင့်သည် ။ ကောင်းခါနီး ဖြစ်လာသည် ။
" အို . .အို . .မောင် . .တအား..တအား.. "
ဒေါ်ဝင်းဝင်းသော် အောက်မှ လူးပျံအောင်ဘဲ စကောဝိုင်း မွှေ့ရမ်းကာ ပင့်ပေးနေသည် ။
" အို . . .အာ...အား . ."
ဦးခင်မောင်လင်း မထိန်းထားနိုင်ဘဲ သုတ်တွေ ပန်းထုတ်ခါ ပြီးသွားသည် ။ ဒေါ်ဝင်းဝင်းသော် မပြီးခင် ဦးခင်မောင်လင်း ပြီးသွားသည် ။
" မောင် ... မောင်... ဆက်ဆောင့်အုံးလေ . .. "
" ဆောရီးဘဲ ကွာ..မောင် ပြီးသွားပြီ . . "
ဦးခင်မောင်လင်းရဲ့ လိင်တန်ဟာ ပြီးပြီးချင်းဘဲ ပျော့ကျ သေးငယ်သွားလေသည် ။ ဒေါ်ဝင်းဝင်းသော်မှာ သည်ယောက်ျားနဲ့ ရပြီး ကထဲက ကာမလမ်းဆုံးကို မရတာကများသည်။ သူ့ လိုးဆောင့်တာကိုရော သူ့လိင်တန်ကိုရော အားမရခဲ့ပေ ။ ဦးခင်မောင်လင်း ကတော့ သူ လိုချင်တာ ရသွားပြီမို့ အ်ိပ်ရာပေါ်လှဲချကာ အိပ်လိုက်သည် ။ ဒေါ်ဝင်းဝင်းသော်မှာတော့ လိုအင် မပြည့်လို့ စိတ်ဆင်းရဲစွာနဲ့ ပြန်အိပ်လို့ မရ ။
" ဟင်း ... တကယ့်ကို တကိုယ် ကောင်းဆန်တဲ့ လူ .... "
စိတ်ထဲမှာ..ယောင်္ကျားဖြစ်သူကို မကျေနပ် ။ ဦးခင်မောင်လင်းနဲ့ မယူခင်က ဒေါ်ဝင်းဝင်းသော် သည် ဘောစ်ဦးတင်ထွန်းဇံနဲ့ ညိဘူးသည် ။ ဦးတင်ထွန်းဇံသည် တကယ့်ကို အလိုးတော်တဲ့ လူဆိုတာ ယောက်ျားရပြီးမှ သိသာခဲ့ရသည် ။ ဦးတင်ထွန်းဇံရဲ့ လိင်တန်သည်လဲ ယောင်္ကျား ဖြစ်သူ ဦးခင်မောင်လင်းထက် ပိုကြီးမားပြီး တချီ ပြီးသွားပြီး နောက်တချီ အတွက် အမြန်ဆုံး ပြန်တောင်နိုင်သော အားကောင်းသော လိင်တန်ကြီးမို့ သူမ အခုလို ဆန္ဒမပြည့်ဝတဲ့ အခါတိုင်း သတိရ တောင့်တမိနေရပေသည် ။
လွန်းလွန်း ဒီနေ့ ဘော့စ် ဦးတင်ထွန်းဇံကို လေဆိပ်မှာ သွားကြို ခဲ့ရပြီး ဘော့စ်နဲ့အတူ သူ့ ထောက်ကြန့်က ခြံကြီးထဲေ၇ာက်ခဲရသည် ။ ဘော့စ် မွေးထားတဲ့ အကောင်တွေကို လိုက်ကြည့်ရသည် ။ သူမွေးထားတဲ့ ဆင်ပေါက်စလေးသည် သူ့ပိုင်၇ှင် ဘာကို လိုလားတယ်ဆိုတာ သိနေတဲ့ ပုံဘဲ.. ဟွန်း..တော်တော်လည် တဲ့ ဆင်ပေါက်လေး ။ လွန်းလွန်းက ချစ်စရာ လေး ဆိုပြီး သွားကိုင်မိပါတယ် ။ လွန်းလွန်းဘက်လှည့်ပြီး ၀ူးကနဲ..နှာမောင်းနဲ့ တွန်းပစ်လိုက်တာ လွန်းလွန်းလဲ ယိုင်လဲ သွားရသည် ။ ဘော့စ် ရဲ့ ရင်ခွင်ထဲကို ယိုင်လဲကျသွားရတာ လေ။ ဘောစ်ကလဲ လွန်းလွန်းကို ဖက်ပွေ့လိုက်ခဲ့ သည် ။ သို့ပေမဲ့ ဘော့စ်က တော်တော် နဲ့ ပြန်မလွှတ်တော့ ။ လွန်းလွန်းရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးလုံးဝန်းတဲ့ ရင်သားတွေဟာ ဘော့စ်ရင်ဘတ်ကြီးနဲ့ တသား ထဲကျအောင်ကို ပိပြားနေတော့တာလေ ။ လွန်းလွန်းက ရုန်းလိုက်တော့မှ ဘော့စ်က ပြန်လွှတ်ပေးသည် ။ ဟွန်း .. လေဆိပ်မှာထဲက သူကြီးက လွန်းကို တချိန်လုံး ကြည့်နေတာ .... အိနြေ္ဒကို မဆည်နိုင်အောင်ဘဲကွာ.။ ခက်တော့ ခက်တော့မှာဘဲ ။ သူကလဲ လူပျိုကြီး...တဲ့ ။ ဦးစောဆိုင်မွန် သည် ခြံထဲက မွေးမြူရေးနဲ့ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေ အကြောင်း..ခြံက မန်နေဂျာ ဦးကျော်စိုးသွင်နဲ့ စကားပြော နေတုံး.. ဘော့စ်က လွန်းလွန်းကို မေးခွန်းတွေ မေးသည် ။ လွန်းလွန်း အကြောင်းတွေ ။
သူ့ ရဲ့အတွင်းရေးမှူး တယောက်ရဲ့ အကြောင်း ကို သူသိချင်တာ အဆန်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး ။ သို့ပေမဲ့ စောစောက ဆင်ကလေးကြောင့် သူ ကြီးနဲ့ ဖက်မိခဲ့တာတွေကြောင့် လွန်းလွန်းက ရှက်နေလို့ပါ ။ ထောက်ကြန့်ခြံကနေ ကန်ပဏီ ရုံးခန်းကို သွားကြသည် ။ လွန်းလွန်းကို သူ ပြန်ေ၇ာက်လာပြီမို့ သူ မနက်ဖန်ကစပြီး ကန်ပဏီ ရဲ့ အမ်ဒီ အလုပ်ကို ပြန်တာဝန်ယူတော့မှာ လို့ ဦးတင်ထွန်းဇံက ပြောသည် ။ သူ့ ရုံးခန်းက စားပွဲကြီးမှာ ထိုင်ပြီး လွန်းလွန်းက သူ့ေ၇ှ့က ထိုင်ခုံမှာ ထိုင်ပြီး စကားပြောကြတာ ဖြစ်သည် ။ သူ့အကြည့်တွေကြောင့် လွန်းလွန်း ရင်တုန်သလိုဘဲ ။
" လွန်းလွန်း ... ကျနော့်အိမ် သိလား .... ရောက်ဘူးလား ... "
" မရောက်ဘူးသေးပါဘူး ... အမ်ဒီ .... "
" စောဆိုင်မွန် မခေါ်သွားသေးဘူးပေါ့ .... အင်း .အခု လိုက်ခဲ့လေ ... အိမ်မှာ ရှိတဲ့ လူအားလုံးကိုလဲ သိထားဖို့လိုမယ် ... အဲ .... ဖုန်းနံပါတ်တွေရော .. ကျနော့်အလုပ်တွေ
လုပ်ဖို့က ကျနော်အိမ်..ကျနော် လုပ်တာတွေ ..သွားတဲ့ နေရာတွေ အားလုံး လွန်းလွန်း သိထားသင့်တယ်လေ . .ကျနော့် ဟမ်းဖုန်း နံပါတ်ကော ရပြီလား ... "
" ရပါပြီ အမ်ဒီ ... ဒေါ်ဝင်းဝင်းသော်.. လွန်း ကို ပေးထားပါတယ် . .တော်တော်များများတော့ ဒေါ်ဝင်းဝင်းသော်က ၇ှင်းပြ ... ပြောပြ ထားပြီးပါပြီ ... "
" လွန်းလွန်း ... သောက်စရာ ဘာများ ရှိလဲ မသိဘူး ... အဲ ရေအေးအေး တခွက်လောက်ရမလား .... "
" ရပါတယ် . .အမ်ဒီ ..ဟုတ်ကဲ့ .... "
လွန်းလွန်း ရေသွားယူပေးတော့ လွန်းလွန်းရဲ့ ကိုယ် အနောက်ပိုင်း အလှအပကို သူ မြင်ရပြန်တော့ တင်ထွန်းဇံ သက်ပြင်းချသည် ။ ဟင်း ... လှလိုက်တဲ့ ဖင်တွေ .... မကြီးလွန်း ... မသေးလွန်း အနေတော်ဘဲ ... လွန်းလွန်း ကမ်းပေးတဲ့ေ၇အေး အေး တခွက်ကို သောက်ရင်း သူ့ဘကြီး တယောက် သူငယ်ငယ်က ဖုန်းပြောနေတာကို သူ ကြားဖူးခဲ့တာ အမှတ်ရမိလိုက်သည် ။ ဘကြီး က သူ ကြိုက်နေတဲ့ မိန်းမကို ဖုန်းနဲ့ပြောနေတာ က . .
( ခင်ခင်စီ . .ခင်ခင်စီ ခပ်ပေးတဲ့ ရေက မေတ္တာ ပါလို့ လားမသိဘူး ... အရမ်း အေးမြပြီး သောက်ရတာ ကောင်းလိုက်တာ ... ခင်ခင်စီ ... ) တဲ့။
သူလဲ အဲလို ဖြစ်နေပြီ ။ လွန်းလွန်းရေ ကျနော်တော့ မြင်မြင်ချင်းဘဲ ချစ်မိသွားပြီဗျာလို့ စိတ်ထဲက ပြောနေမိသည် ။ ဒေါ်ဝင်းဝင်းသော်သည် လွန်းခင်ခင် ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးကို ဘော့စ်နဲ့ ပတ်သက်တာတွေ
ပြပေး ၊ပြောပြပေးတော့ သူမနဲ့ ဘော့စ် ... ဟိုတုံး က ချစ်တင်းနှီးနှောခဲ့ ( လိုးခဲ့ )ကြတာတွေကို ပြန်လည် သတိရပြီး လွန်းခင်ခင်ကို နဲနဲ မနာလို သလို ဖြစ်မိရသည် ။ အင်း .. ဒီကောင်မလေးနဲ့ လဲ သူ ငြိကို ငြိမှာပါဘဲ ။ ကြည့်ပါအုံး .... ပက်ပက်စက်စက်ကို လှတာ ... ကိုယ်လုံးကလဲ ထိပ်တန်းဘဲ ... ကြည့်ကောင်းမဲ့ ပွဲတခုဘဲ .... အင်း ... ဘော့စ် ဘော့စ် ... ငါ့တုံးက ငါကလဲသူ့ ကျေးဇူးတွေ အရမ်းများတာကြောင့် သူ့ကို လက်ထပ်ယူဖို့ ငါ မတောင်းဆိုရက်ခဲ့ဘူး .... သူကလဲ ငါ့ကို ... သူ မိန်းမ မယူချင်သေးဘူး ... အရင်လေလွှတ် ထားခဲ့တယ်လေ ... ငါ ဒီအတိုင်းဘဲ နေရင်ကောင်းသား ... ရှည်ပြီး ကိုခင်မောင်လင်းကို သွားလက်ထပ်မိ လိုက် တယ် ... ဒေါ်ဝင်းဝင်းသော်သည် ဘော့စ်ပြန်ရောက်လာတော့ ဘော့စ်နဲ့ တနေရာ ရာမှာ တွေ့လိုက်ချင်မိသည် ။ ကိုကိုဇံလို့ လူကွယ်ရာမှာ သူမခေါ်ခဲ့သော ဘော့စ်နဲ့ တချီ တမောင်းလောက် တွေ့လိုက်ချင်သေးသည် ။အင်းလေ လွန်းလွန်း ဆိုတဲ့ ငါးစိမ်းလေး ရှိနေမှတော့ ၀င်းဝင်းသော် ဆိုတဲ့ ငါးကင်မကို သူပစ်ပယ်တော့မလား မသိပါဘူး ။ စောဆိုင်မွန်ကလဲ သူငယ်ချင်းကောင်း ပီသလိုက်တာ ။ ဒီလို လန်းတဲ့ ဆော်လေးကို ဘယ်လိုများ ရှာတွေ့ပြီး သူ့ဘော့စ် အတွက် ခန့်ပေးသလဲ မသိတော့ပါဘူး ။
ယုမသည် အန်ကယ်ဇံ ပြန်ရောက်လာလို့ စိတ် တွေ လှုပ်ရှားနေသည် ။ အန်ကယ်လ်ဇံ နိုင်ငံခြား ကို ခရီးထွက်မဲ့ညက အကြီးအကျယ် ပါတီပွဲ လုပ် သည် ။ အန်ကယ်လ်ဇံလဲ အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ အရက်သောက်ပြီး မူးနေသည် ။ ယုမတို့လဲ အန်ကယ်ဇံတို့ လိုတာတွေလုပ်ကိုင်ပေးကြသည်။ ဧည့်သည်တွေ ပြန်သွားပြီးတော့ အန်ကယ်လ်ဇံ က သူ့အခန်းထဲမှာ ပွနေတဲ့ ပုလင်း ဖန်ခွက်တွေ ကို လာသိမ်းခိုင်းသည် ။ ယုမသည် အန်ကယ်ဇံ ကုတင်ကြီးရဲ့အနီး ကြမ်းပြင်အောက်မှာ ကျနေ တဲ့ အမှိုက်တွေကို ကုန်းကောက်နေတုံး အန်ကယ်ဇံ ရောက်လာသည် ။
(ယုမ ... နင့်ကို ကလေးဘဲမှတ်နေတာ ... နင် ကလေး မဟုတ်တော့ပါလား ... )
( ဘာလို့လဲဟင် အန်ကယ်လ်ဇံ . .)
( ဟ ..နင့် ဖင်ကြီးတွေက ကားထွက်ပြီး အယ်နေတာဘဲ ..တကယ့်အပျိုမ ဖြစ်နေပေကာ . .)
( အို . .အန်ကယ်ဇံကလဲ . .)
ယုမ ဖင်တောင့်တာ အယ်တာကို ဗြောင်ကြီး လြာေ့ပာနေတော့ ယုမ ရှက်တာပေါ့ ။
( လာစမ်း ... ယုမ ဒီအနား .... )
အန်ကယ်ဇံက ကုတင်ကြီးပေါ်ထိုင်နေရာက ယုမ ကို ဆွဲခေါ်လိုက်သည် ။ ယုမ တုန်နေသည် ။
( ဟား ... တကယ်ဟာ နင့်ကို ကလေးဘဲ အောက်မေ့နေတာ ... နင့်ဖင်တွေ တကယ်တောင့်တာဘဲ ... )
အန်ကယ်လ်ဇံက ဖျတ်ကနဲ ယုမ ဖင်တုံးအိအိကြီး တွေကို ကိုင်လိုက်ပါသည် ။
( အို့ . . )
ယုမ ရုန်းဖို့ ကြိုးစားသည်။ ကြောက်လဲ ကြောက်ရသည် ။ အန်ကယ်ဇံကို ကလန်ကဆန် ဘယ်သူမှ မလုပ်ရဲ ။ယုမ တင်မက ယုမ မိဘတွေ တောင် အန်ကယ်ဇံကို မော်မကြည့်ရဲ ။ တဆွေ တမျိုးလုံးကို ထောက်ပံ့ကြည့်ရှုထားပြီး နေစရာ လဲ ပေးထားသည် ။ ကလေးတွေကို ကျောင်းလဲ ထားပေးသည် ။ယုမတို့က တကယ်ဆို သွေးသား မတော်စပ် ။ ရပ်ဆွေရပ်မျိုးသာ ဖြစ်သည် ။ ၀ိုင်းလုပ်ဝိုင်းစား သဘောနဲ့ အန်ကယ်ဇံတို့ မိသားစုနဲ့ ယုမတို့လာ နေနေကြတာ ဖွားဖွားကြီး ရှိကထဲကပါ ။အန်ကယ်ဇံသည် အဖွားနဲ့ ကြီးပြင်း လာသူဖြစ်သည် ။သူ့ မိဘတွေ သူငယ်ငယ်ထဲက ကွယ်လွန်ခဲ့တာမို့ ဖွားဖွား ဒေါ်ဖွားဇံ ကဘဲ မွေးခဲ့ သည်။ ဖွားဖွားက ရှေးခေတ်ကထဲက မျိုးရိုးနဲ့ ချမ်းသာလာတဲ့ သူဌေးမကြီးဆိုတော့ အန်ကယ်ဇံ သည် မိဘမဲ့ မြေးလဲ ဖြစ်တာကြောင့် ဖွားဖွားက အရမ်း အလိုလိုက်ခဲ့သည် ။ လိုချင်တာ အကုန် ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ဒါတွေက ယုမကို အမေက ပြောပြခဲ့လို့ ယုမ သိတာပါ ။ ယုမဖင်တွေ ကို အန်ကယ်ဇံ ကိုင်နေသည် ။ ပွတ်ကြည့်နေရာက ဆုပ်ကိုင်ကြည့်နေသည် ။
(အူး . .ယုမ ...နင့်ဖင်တွေက ကိုင်လို့ ကောင်းလိုက်တာဟာ . .)
ယုမ ကြောက်လို့ မပြောရဲလို့ ငြိမ်နေတော့ အန်ကယ်ဇံက တဆင့်တက်လာပြီး ယုမ ဖင်ကြား ထဲကို သူ့လက်ချောင်းတွေနဲ့ နှိုက်စမ်းသည် ။
( အို့ . .အန်ကယ် ..မ...မလုပ်ပါနဲ့ . . ..)
( အံမာ ... ယုမ...နင်က ငါ့ကို ပြန်ပြောတာ လား .. )
( မ...မဟုတ်ပါဘူး . ..ကြောက်လို့ပါ . .)
အန်ကယ်ဇံ လက်ချောင်းတွေက ယုမရဲ့ စအို ပေါက်လေးကို ကလိနေသည် ။
( နင့် ပါးစပ်လေး ခဏ ပိတ်ထား ... ပြစမ်း.. နင့်နို့တွေကော ... တော်တော်ကြီးနေ ပြီလား ...)
အန်ကယ်ဇံသည် ယုမ နို့တွေကို ကိုင်ကြည့်နေ သည် ။ ယုမလေ ရင်တွေ တုန်တာ အရမ်းပါဘဲ ။ကြက်သီးတွေ တအားထလာပြီး လက်တွေ
ခြေတွေ တုန်နေသည် ။
( ဘော့စ် . . .)
လှေခါးက ခေါ်သံကြောင့် အန်ကယ်ဇံ ယုမကို လွှတ်လိုက်သည်။ သူ့ကားဒရိုင်ဘာ မောင်စိုးပါ ။
( ဘာလဲဟေ့ . .မောင်စိုး ... )
( ဘော့စ် ရဲ့ သူငယ်ချင်း ဦးကောင်းမော် လုံးဝ မူးပြီး ကားမမောင်းနိုင်တော့လို့ . .သူ့အိမ်ကို ကျနော် လိုက်ပို့ပေးလိုက်ရမလား ... )
( ဟေ . .)
အန်ကယ်ဇံ အောက်ထပ်ကို ပြေးဆင်းသွား သည် ။ယုမလဲ သိမ်းစရာတွေ အမြန်သိမ်းပြီး အောက်ထပ်က ယုမ အခန်းလေးဆီ ဆင်းခဲ့ ပါသည် ။ တနေကုန် အလုပ်လုပ်ထားလို့ နံစော်ညစ်ပတ်နေလို့ ရေချိုးဖို့ ပြင်တော့ ပေါင်ကြားက ယုမ ပိပိဟာ အရေတွေ စိုစိုရွှဲနေတာ တွေ့လိုက်ရပါသည် ။ အို ... ခုန အန်ကယ်ဇံ ကိုင်တာ.. နှိုက်တာတွေကြောင့် ဖြစ်မည် ။ ယောင်္ကျားရဲ့ အထိတွေ့ကြောင့် စိုလာရတာကို ယုမ အံ့သြနေမိသည် ။
ယုမသည် အခု အန်ကယ်ဇံ နိုင်ငံခြားက ပြန်ရောက်လာတော့ သူ မသွားခင်ညက ကိုင်ထား နှိုက်ထားတာကြောင့် ရှက်သလိုလို ရင်ဖိုသလိုလို ဖြစ်နေသည် ။အန်ကယ်ဇံ ကတော့ ဘာမှ မဖြစ်ခဲ့သလိုဘဲ ။ယုမကိုပြန်တွေ့တော့..
( ချာတိတ် ...နေကောင်းလား ... နင့်အတွက်လဲ လက်ဆောင်ပါတယ် ... )
ဆိုပြီး ခေါင်းကိုပုတ်သည် ။ နောက်တနေ့ မနက် အိမ်မှာ ထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးတာတွေ အစစ တာဝန်ယူနေတဲ့ ဒေါ်လေးနီက
( ယုမ ... နင့်အန်ကယ်ဇံ နိုးပြီလား မသိဘူး . .သွားချောင်းကြည့်စမ်း ... နိုးနေရင် ဘာစားပါမလဲလို့ သွားမေး ... ) လို့ ခိုင်းလိုက်တာကြောင့် ယုမ အန်ကယ်လ်ဇံ အခန်း ကို သွားချောင်းသည် ။ အိပ်ရာကုတင်ကြီးပေါ်မှာ အန်ကယ်လ်ဇံ မ၇ှိ ။ ဘယ်မှာလဲ ဆိုပြီး စူးစမ်း ချင်စိတ်နဲ့ ပွင့်နေတဲ့ တံခါးကနေ သူ့အိပ်ခန်းထဲ ၀င်သွားမိသည် ။ အိပ်ခန်းနဲ့ တွဲရက် ရေချိုးခန်း အိမ်သာ အခန်းကြီးထဲကနေ အန်ကယ်လ်ဇံ ရုတ်တရက် ထွက်လာတော့ ယုမ လန့်သွား သည် ။ အို ... ပိုပြီး လန့်သွားရတာက အန်ကယ်ဇံ သည် ကိုယ်တုံးလုံးကြီးေ၇ချိုးခန်းထဲက ထွက်လာလို့ပါ ။
( ဟိတ် ... ချာတိတ် ... ဘာတုံး ... )
( ဟို..ဟို . ..ဟို . .ဒင်း . . .)
ယုမ မျက်လုံးတွေက သူ့ပေါင်ကြားက ဒုတ်တန် မဲမဲကြီးဆီေ၇ာက်နေတာ သူတွေသွား သည် ။
( လာစမ်း ... ယုမ . . .)
( ရှင် ... ဟုတ် . .ဟုတ်ကဲ့ . .. .)
( ကိုင်ကြည့်စမ်း . . )
ယုမ လက်ကို သူဆွဲပြီး သူ့ပေါင်ကြားက အတန်ကြီးကို ဆုပ်ကိုင်စေသည် ။ အို ... နွေးနွေးကြီး ။
( ဆုပ်ထားလေ ... )
အို ... သူ့ဟာကြီးက အရမ်း တုတ်တာဘဲ ။ ယုမ ဆုပ်ကိုင်ထားဆဲ အန်ကယ်ဇံသည် ယုမကို ဆွဲဖက်လိုက်သည် ။
( ယုမ ... နင် ရီးစား ရှိပြီလား . .)
( ဟင့်အင်း ... )
( ပြစမ်း . .နင့် နို့တွေ ... )
ဆိုပြိး ယုမနို့တွေကို အင်္ကျီ အပေါ်ကနေ ကိုင်ကြည့်နေသည် ။ ယုမလေ ရင်တွေ ခုန်တာ သေးတောင်ထွက်ကျပြီ ထင်မိတာဘဲ ။
( တော်တော် နို့ကြီးနေပြီဘဲ . . နင် လှလဲ တော်တော် လှလာတယ် . .)
( ယုမ . .)
( ရှင် . .)
( နင့် အ၀တ်တွေ ချွတ်လိုက်စမ်း . . .)
( ဟို..ဟို ... မချွတ်ချင်ဘူး ... ယုမ ရှက်တယ် ... )
( အင်း ... နင် ၇ှက်နေလား ... ဒါဆို အ၀တ်မချွတ်ချင်ရင် ငါ့လီးကြီးကို နမ်းပေး ... နင်နမ်းပေး ရင် အ၀တ်ချွတ်စရာ မလိုတော့ဘူး ... ဘယ်လိုလဲ ... )
( ကျမ တခါမှ မနမ်းဘူးဘူး ... မနမ်းတတ်ဘူး .. )
( လာ ငါပြပေးမယ် ... )
အန်ကယ်ဇံက ကုတင်ကြီးပေါ် ထိုင်လိုက်ပြီး ယုမ ကို ကုတင်အောက်မှာ ဒူးထောက်စေသည် ။သူ့ ပေါင်ကြားမှာ ယုမမျက်နှာကို အပ်စေပြီး သူ့ဟာ ကြီးကို ယုမ ပါးစပ်မှာ တေ့လိုက်ပြီး ...
( ယုမ ပါးစပ်ဟ ... ငုံလိုက် ... )
ယုမလဲ စိတ်အညှို့ခံနေရသူတယောက်လိုဘဲ အန်ကယ်ဇံ ခိုင်းသမျှ ကို လုပ်နေမိ သည် ။ မကြာခင်မှာဘဲ ယုမသည် အန်ကယ်ဇံ အတန်ကြီးကို စုပ်တတ်သွားသည် ။ လျှာလေးနဲ့ ဒစ်ကြီးရဲ့ အချိုင့်ထဲကို ထိုးလှိမ့်ကာ ကစားပေး တတ်လာသည် ။
( အင်း ... ယုမ လိမ္မာတယ် ... မုန့်ဘိုးလဲ ပေးရမယ် ... နင် ကောလိပ်တက်ချင်ရင်လဲ ငါ ထားပေးမယ် ... ဒီလိုမနက် အစောကြီးဆို နင် လာခဲ့ ... ငါ အိပ်ပျော်နေရင်တောင် ... နင် လာစုတ်ပေး . .ကြားလား ... )
ယုမသည် စုပ်နေရင်းမို့ ပါးစပ်က ဖြေလို့မရသဖြင့် ခေါင်းညိမ့်ပြလိုက်ပါသည် ။
( အင်း ... ဒီလိုမှပေါ့ ... နင့် အဖေနဲ့အမေကိုလဲ ငါကြည့်မယ် ... အိမ်တလုံး ဆောက်ပေးမယ် .. နင် သဘောကျတယ်မှုတ်လား ... )
ယုမ ခေါင်းညိမ့်ပြလိုက်ပါသည် ။ ခဏအကြာ အန်ကယ်ဇံက မြန်မြန်စုပ်လို့ ခိုင်းလာသည် ။
( စုပ် ... စုပ် ... ပြီးတော့မယ် ... )
ယုမလဲ တအား စုပ်ပေးလိုက်တာ ဗျင်းကနဲ ဗျင်းကနဲ အရေတွေ ပါးစပ်ထဲ ပန်းဝင်လာလို့ ယောင်ပြီး မြိုချပစ်မိလိုက်ပါသည် ။
( အား ... ကောင်း ... ကောင်းလိုက်တာ ချာတိတ်ရယ် ... အင်း ... )
တင်ထွန်းဇံ ရုံးခန်းကို ရောက်တော့ လွန်းလွန်းက သူ ရောက်မလာခင် သူ့ကိုခေါ်တဲ့ ဖုန်းတွေနဲ့ လာတွေ့လိုတဲ့ လူတွေရဲ့ အမည်စာရင်းတွေ လာပြသည် ။ အလုပ်လုပ်စရာတွေ လုပ်နေဆဲ လွန်းလွန်းက ရုံးတွင်းလိုင်းကနေ သူ့ကို တွေ့ချင်လို့ အပြင်မှာ ရောက်နေကြောင်း ပြော သည့်သူ လွှတ်လိုက်ဖို့ပြောလိုက်သည် ။ ၀င်းဝင်းသော် ၀င်လာသည် ။
"ကိုကိုဇံ . .အာ . .ဆောရီး အမ်ဒီ . .နေကောင်းလား ... မနေ့က ပြန်ေ၇ာက်တုံးက အမ်ဒီ ပင်ပန်း အလုပ်ရှုပ်နေမှာဘဲ ဆိုပြီး ... အခုမှ လာနူတ်ဆက်တာပါ ..."
"ကောင်းပါတယ် . .၀င်းသော်ကော နေကောင်း တယ်မှုတ်လား ... အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်တာ ထူးခြားတာ ရှိလား ... "
"မရှိပါဘူး ... အားလုံး အဆင်ပြေပါတယ် ... အော် ဒါနဲ့ စက္ကတရီ အသစ်လေးရော ... သဘော ကျရဲ့လား ... "
" ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ ၀င်းသော် ... "
" အော် . .စက္ကတရီအသစ် ၀င်းသော် ထရိန်းလုပ်ပေးတာ အိုကေရဲ့လား မေးတာပါ ..."
" ပြေပါတယ် ... "
" အမ်ဒီ ဘာလဲ ခိုင်းစရာ ရှိရှိ...၀င်းသော်ကို ခေါ်ပါနော် . .၀င်းသော်ကလေ ...အမ်ဒီ့အတွက် ဆို ဘာလုပ်ရလုပ်ရပါ အမ်ဒီ... "
ဒီစကားတွေ ပြောတဲ့အခါ ဒေါ်ဝင်းဝင်းသော် သည် တင်ထွန်းဇံကို အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ လေယူ လေ သိမ်း မျက်နှာပေးနဲ့ ပြောလိုက်တာ ဖြစ်သည် ။
" အင်း ... ဒါကြောင့်လဲ ၀င်းသော်ကို အားကိုး နေတာပေါ့ ... ဒါကြောင့်လဲ ၀င်းသော်ကို မားကက်တင်း မန်နေဂျာ ၇ာထူး ပေးထားတာပေါ့ ... မဟုတ်ဘူးလား ... "
"၀င်းသော်ကတော့ အရင်ကလိုဘဲ အမ်ဒီ့ စက္ကတရီ ပိုဆေရှင်ဘဲ ပိုကြိုက်တယ် ...၀င်းသော်လေ . .လွန်းလွန်း ကို ဂျဲလက်စ် ဖြစ်မိတယ် ... သိလား ... "
တင်ထွန်းဇံက ရယ်လိုက်သည် ။
" အမ်ဒီ ... အမ်ဒီ နဲ့ ၀င်းသော် တွေ့လို့ ရမလားဟင် ... "
" ခု တွေ့နေတာဘဲ ... ၀င်းသော် ဘာပြောချင် လဲ ... အခုပြောနိုင်တယ် ... ကဲ... ပြော ..."
"အမ်ဒီ့ လေသံက စိမ်းသလိုဘဲ . .. "
သည်တုန်း အပြင်က လွန်းလွန်းဆီက ပိကနဲ ရုံးတွင်းပြောဖုံး ၀င်လာသည် ။
" အမ်ဒီ . .ကွန်တိန်နာ ဆိပ်ကမ်းကနေ .. လှလှမင်း . .ခေါ်ပါတယ် . .အရေးကြီးလို့တဲ့ ... "
အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စပေါ်လာလို့ ဒေါ်ဝင်းဝင်းသော် လဲ စကားဆက် မပြောနိုင်တော့ ။
" ကဲ ... ၀င်းသော် ... ဒို့ ပြေးလိုက်အုံးမယ် ... "
ဒေါ်ဝင်းဝင်းသော် မျက်နှာပျက်ပျက်နဲ့ ကျန်ခဲ့ လေသည် ။ ဦးတင်ထွန်းဇံသည် လွန်းလွန်းကို ခေါ်ပြီး ကွန်တိန်နာ ဆိပ်ကမ်းကို ပြေးလေသည် ။ လင်းခရုဆာ ကားကြီးထဲမှာလဲ ဦးတင်ထွန်းဇံ သည် လွန်းလွန်းကို အမြဲ ကြည့်နေသည် ။ ကြာတော့ လွန်းလွန်း ရှက်လာသည် ။ အလုပ်ပြီးတော့ နေ့လည် ၂နာရီ ရှိနေပြီ ။
" လွန်းလွန်း . .ဆာပြီလား ... "
လွန်းလွန်းက ဟန်ဆောင်မနေ ။ ပြုံးလျက် ဆာပြီ လို့ ခေါင်းငြိမ့်ပြသည် ။
" ဘာ စားချင်လဲ ... "
" ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါ ... "
" မောင်စိုးရေ ... ရွှေဘဲကို မောင်းကွာ ... "
ခါတိုင်းဆိုရင် မောင်စိုးသည် သူနဲ့အတူ စားနေ ကျ ။ ဒီနေ့ လွန်းလွန်းပါလို့ မောင်စိုးက အလိုက် သိစွာနဲ့ ...
" ကျနော် အောက်ထပ်မှာဘဲ စားမယ်ဘော့စ်... ကားကို မြင်သာတဲ့ နေရာမှာ စားချင်လို့ပါ ... "
တဲ့ ။ လွန်းလွန်းနဲ့ နှစ်ယောက်ထဲ ထမင်းအတူ စားရင်း လွန်းလွန်းကို သူ ကြည့်လို့မ၀ ။လွန်းလွန်းက သူ ကြည့်နေတာကို တွေ့သွားလို့ ခေါင်းငုံ့ မျက်လွှာချသွားသည် ။ လွန်းလွန်းရဲ့ ဆွတ်ဆွတ်ဖြူသော အသားကြောင့် သူမ နားရွက်ဖျားလေးတွေ နီရဲနေတာ သိသာသည် ။လွန်းလွန်း ရှက်နေပုံရသည် ။
" လွန်းလွန်း ... ကျနော်နဲ့ အလုပ်လုပ်ရတာ အဆင်ပြေရဲ့လား ... "
" ဟုတ်ကဲ့ အမ်ဒီ ..."
" အမ်ဒီလို့ လွန်းလွန်း ကျနော့်ကို ခေါ်တာ တမျိုးကြီး ဘဲ ... "
" ဒါဖြင့် လွန်းက ဘယ်လိုခေါ်ရမလဲ ... ဘော့စ် လား ... "
" အင် ... အဲဒါကြီးလဲ သိပ် မကြိုက်သလိုဘဲ ... မောင်စိုး ခေါ်တာမျိုးကြီး ... မပီတော့ ဘောစိ ... ဘောစိနဲ့ ... "
လွန်းလွန်းက သူ့အပြောကို သဘောကျပြီး ရယ် သည် ။လွန်းလွန်း ပုဂံထဲ ဘဲကင်ဖတ်တွေ သူ ထည့်ပေးတော့ ...
" လွန်း ... တအားဝပြီး ပုံပျက်လာလို့ အမ်ဒီ့ အတွင်းရေးမှူးက ဖက်တီးကြီးလို့ ပြောကြရင် အမ်ဒီက လွန်းကို အလုပ်ဖြုတ်နေမှာ ..."
လို့ ပြောရင်းရယ်သည် ။
ညဖက်မှာ လွန်းလွန်းသည် ကွန်ပြူတာမှာ လုပ်စရာတွေ လုပ်အပြီး ဖတ်နေကျ အွန်လိုင်းမှာ တင်ထားတဲ့လိင်အသားပေး မြန်မာ စာအုပ်တွေ ဖတ်ရင်း စိတ်တွေ ထကြွလာရသည် ။ သူ ဒီည ဖတ်မိတဲ့ စာအုပ်က ကန်ပဏီ ပိုင်ရှင် ဘော့စ်တယောက် နဲ့ သူ့စာရေးမလေးတို့ ငြိကြတဲ့ ဇာတ်လမ်း ။ လက်ရှိ လွန်းလွန်းရဲ့ ဘော့စ် ဦးတင်ထွန်းဇံ ကလဲ လွန်းလွန်းကို ကြိုက်နေတဲ့ပုံ ရှိတာမို့ ဒီဇာတ်လမ်းကို စိတ်ဝင်တစား ဖတ်မိ သည် ။ ဖတ်မိတော့လဲ လိင်ဆက်ဆံတဲ့ အခန်း တွေမှာ သွေးတွေ ဆူဝေလာပြီး ကာမစိတ်တွေ ပြင်းထန်လာသည် ။ တနေ့မှာ သူမရဲ့ဘော့စ် ဦးတင်ထွန်းဇံသည်လဲ ဇာတ်လမ်းထဲက ဘော့စ် လိုဘဲ သူမကို အချစ်စခန်းဖွင့်လာနိုင်သည်လို့ စိတ်ကူးတွေ ယဉ်မိကာ သူမ ပေါင်လည်ဂွဆုံက ရတနာရွှေကြုတ်ကြီးကို ထမိန်အပေါ်ကဘဲ ပွတ်သပ်နေမိသည် ။ လွန်းလွန်းသည် အိမ်ထောင်ပြုဖို့ အချိန်တန်နေပြီလို့ လွန်းလွန်း အမေက ပြောနေတာ ကြာပြီ ။ ဟိုတလောက မေမေ လာလည်သွားသည် ။ လွန်းလွန်းကို ကြိုက်တဲ့ လူမတွေ့သေးဘူးလားလို့ မေးနေသေး သည် ။ လတ်တလော လွန်းလွန်းသည် လှည်း
တန်းမှာ တိုက်ခန်းတခန်းကို ဝေမာဝင်းဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းတယောက်နဲ့စပ်တူ ငှားနေနေသည်။အဲဒီ သူငယ်ချင်း ဝေမာဝင်းကတော့ ရီးစား ရှိသည် ။ မြို့နယ်ရဲစခန်းတခုက ရဲအရာရှိ ဖြစ်သည် ။ ဝေမာဝင်းက သူဘဲက ရဲအုပ် ဖြစ်ပြီး သူမဆီ အမြဲလာတွေ့နေလို့ ရပ်ကွက်ထဲက လူငယ်တွေက သူမကို ကွယ်ရာမှာ ( ရဲလိုး ) လို့ ခေါ်ကြောင်း လွန်းလွန်းကို ပြောပြသည် ။ ဒီလို စကားလုံးမျိုးကို ပြောရင် လွန်းလွန်း ကြက်သီး တွေ ထသည် ။ ပြောရမှာ ရှက်သလိုဘဲ ။ လွန်းလွန်းသည် ကုတ်ကမြင်းသာ ဖြစ်သည် ။ ညဖက် သူမ အခန်းထဲ ဂျက်ထိုးပိတ်ခါ အွန်လိုင်း က စာတွေဖတ် ကျိတ်ပြီး အာသာဖြေတဲ့မိန်းမ ဖြစ်သည် ။ လူရှေ့မှာတော့ အင်မတန်မှ ရှက်တတ် ကြောက်တတ်သည် ။ တနေ့ လွန်းလွန်း အလုပ်က ပြန်အလာ အခန်းဖေါ် ဝေမာဝင်းရဲ့ အခန်းဘက်က ယောင်္ကျားအသံ ကြားရသည် ။ အော် ... ဝေမာရဲ့ဘဲေ၇ာက်နေ တာကိုး ။ လွန်းလွန်းလဲ ရေချိုးဖို့ ရုံးဝတ် အ၀တ်တွေကို ချွတ်ပစ်ပြီး တပတ်ရစ် ထမိန်နွမ်းကလေး ကို ရင်လျားလိုက်သည် ။ သူမ အိပ်ခန်းကနေ ရေချိုးခန်းရှိရာကို ထွက်တော့မဲ့ ဆဲဆဲ တဘက် ခန်းက ထူးခြားတဲ့ အသံတွေ ကြားလိုက်ရလို့ နားစွင့် လိုက်တော့ ... အို ... ဝေမာဝင်းနဲ့ သူ့ဘဲ ရဲအုပ်ဆိုတဲ့ လူကြီး ချစ်တင်းနှီးနှောကြတဲ့ အသံတွေ ဆိုတာ လွန်းလွန်း သိလိုက်ရပါတော့ သည် ။ ဆန့်ကျင်ဘက် လိင်ကို စိတ်ဝင်စားနေသော ( တနည်းအားဖြင့် အရွယ်ရောက်လာတာကြောင့် သဘာဝ စိတ်တွေ တောင့်တ ဆာလောင်နေသော ) လွန်းလွန်းသည် ရေငတ်တုံး ရေတွင်းထဲ ကျရသည် ဆိုသလိုဘဲ ရေသွား မချိုးသေးဘဲ ဝေမာဝင်းတို့ အသံတွေ ကို နားထောင်နေမိပါတော့သည် ။ ဝေမာဝင်းရဲ့ အသံက ကာမစိတ်ပြင်းထန်နေတဲ့ အသံ ။
( ကိုကို . .လိုး . .လိုး . .. ဝေမာ့ကို တအားလိုးပေးပါတော့ရှင် . .ဝေမာ့ စောက်ပတ် ယားလှပါပြီ . .)
သူမ ကိုကိုသည် ဘယ်လောက်များ နှူးနှပ်လိုက် သလဲ မသိဘူး ။ဝေမာဝင်း . .အရှက်မရှိ လိုးပေးရန် တောင်းခံနေပြီ ။ ဝေမာဝင်း အသံကြောင့် လွန်းလွန်းမှာ စိတ်တွေ နိုးကြွ လာရသည် ။ လွန်းလွန်းရဲ့ နို့တွေ တင်းလာသ လိုဘဲ ။ နို့သီးလေးတွေ မာတောင်လာသလိုဘဲ ။ ပေါင်ကြားက မုံ့ပေါင်း ဖေါင်းဖေါင်းကြီးကလဲ ပိုဖေါင်းစူ လာရသလိုဘဲ ။ ခဏကြာတော့ ဖွတ်ဖွတ်ဖပ်ဖပ် နဲ့ လိုးသံတွေ ကြားရတော့တာ ဘဲ။ ဝေမာဝင်းရဲ့ ကုတင်လှုပ်သံကလဲ တကျွီကျွီ နဲ့ ။ ဝေမာဝင်း ဘဲကြီးရဲ့ "အင်း . .အင်း" နဲ့ အားယူသံတွေ ... ဝေမာဝင်းရဲ့ ချက်ကောင်းကို ထိသွားလို့ ညည်းတဲ့ အသံတွေက ရုပ်မမြင်ရသော်လည်း လွန်းလွန်းအတွက် စိတ်တွေ ထိန်းမရအောင် ဖေါက်ပြန် နိုးထ စေလေသည် ။ လွန်းလွန်း သူမ ပေါင်ကြားကို ပွတ်မိရသည် ။ မျက်စိတွေ မှိတ်လို့ နံရံမှာ မှီထိုင်ရင်း သူမ ပိပိကို လက်ချောင်းတွေနဲ့ ဖိဖိပွတ်နေမိသည် ။ တဖက်ခန်းက တဖုန်းဖုန်းနဲ့ လိုးဆောင့်နေသလို လွန်းလွန်းလဲ သူမ ပိပိကို လက်ချောင်းတွေနဲ့ ထိုးဆွကစားနေမိရပါသည် ။
လွန်းလွန်းသည် အခုမှ ဘော့စ်အစစ်နဲ့ လုပ်ရလို့ အစစ အခွင့်အရေးတွေ ရလာသည် ။ စောစောက ဦးတင်ထွန်းဇံ ပြန်မလာခင်တုံးက ဦးစောဆိုင်မွန်က ဦးတင်ထွန်းဇံအတွက် ကြိုတင် အလုပ်ခန့်ထားပေးတာသာ ဖြစ်လို့ ဟမ်းဖုန်းလို ဟာကို ပေးထားခြင်းမရှိသေး ။ အခုတော့ လွန်းလွန်းသည် အင်တာနက်ရသော အိုင်ဖုန်းနဲ့ ဖြစ်နေပြီ ။ ဦးတင်ထွန်းဇံရဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဖြစ်ရတာ ဒုံးကနဲ ဒိုင်းကနဲ သူမ ဘ၀ ပြောင်းလဲမှု တွေ ဖြစ်လာသည် ။ဦးတင်ထွန်းဇံ ကိုယ်တိုင် လွန်းလွန်းကို ကားမောင်းသင်ပေးနေသည် ။ လွန်းလွန်း ကားလိုင်စင်ရပြီးတော့ ဦးတင်ထွန်းဇံ သည် လွန်းလွန်းကို ကားအရောင်း ဆိုင်တခုကို ခေါ်သွားပြီး အ၀ါရောင် တောက်တောက် ကားလေးတစီးကို ၀ယ်ပေးလိုက်သည် ။
" ဒါ လွန်းလွန်းအတွက် ... ကျနော့် အလုပ်တွေ ကို တာဝန်ယူ လုပ်ပေးနေတဲ့ လွန်းလွန်း သွားရေးလာရေးအဆင်ပြေအောင် .... "
လွန်းလွန်း . .အိပ်မက်လိုဘဲ ဖြစ်နေသည် ။စိတ်လှုပ်ရှားလွန်းနေသည် ။ ငြင်းလိုပေမဲ့ ငြင်းရခက်နေသည် ။
" ဟို . .ဟို . .အမ်ဒီ ... လွန်းက လှည်းတန်းက တိုက်ခန်းမှာနေနေတာဆိုတော့ ကားထားဖို့ အခက်အခဲ . .."
လွန်းလွန်း စကားဆုံးအောင် မပြောလိုက်ရ . .။ ဦးတင်ထွန်းဇံက လက်ကာလိုက်သည် ။
" သိပြီ ... လွန်းလွန်း ဒီလောက် ပြောလိုက်တာနဲ့ ကျနော် သိပြီ ... ကား ရပ်ဖို့ နေရာ လိုတယ် . . .ဟုတ်တယ် ... လွန်းလွန်း နေဘို့ နေရာပါ လိုတယ် . ."
ဦးတင်ထွန်းဇံ ဖုန်းကောက်ဆက်လိုက်သည် ။ သူ့ မိတ်ဆွေ ဦးကက်နက် ဆီကို ။ ဦးကက်နက် က မြေခြံ အိမ်တိုက်ခန်း ရောင်းဝယ် သည် ။ ဦးတင်ထွန်းဇံသည် ဦးကက်နက်ဆီက သူ့ ကန်ပဏီ ရုံးခန်းနဲ့ သိပ် မဝေးတဲ့ နေရာကောင်း တခုမှာ ကားဂိုဒေါင်ပါတဲ့ အိပ်ခန်း ၂ ခန်းပါ ကွန်ဒို တိုက်ခန်းတခန်းကို ၀ယ်သည် ။ လွန်းလွန်း ကို ပြောင်းစေသည် ။ နေ့ချင်းညချင်း လွန်းလွန်း သည် တိုက်ခန်း အသစ် ကားအသစ် ဖုန်းအသစ် နဲ့ ဖြစ်သွားသည် ။ လွန်းလွန်းသည် စီးပွါးလဒ်မြင်ပြီး အလုပ်ကြိုးစားလို့ ဦးတင်ထွန်းဇံရဲ့ အလုပ် သဘာဝတွေကို အချိန်တိုတို နဲ့ တတ်မြောက်ကာ အလွန်အားကိုးရတဲ့ အတွင်းရေးမှူးတယောက် ဖြစ်လာလေသည် ။
Posted by အမည်မသိစာအုပ် at 10:36